ကွန်တိန်နာသင်္ဘောမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိ ကမ်းခြေတွင် ပင်လယ်ရေနေသတ္တဝါများ ထပ်မံသေဆုံး - Xinhua News Agency
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့ရှိ ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းအနီး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သော X Press Pearl ကွန်တိန်နာသင်္ဘော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Sri Lanka Air Force Media/Handout via Xinhua)
ကိုလံဘို၊ ဇွန် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းပြင်ပ ပင်လယ်ပြင်တွင် X-Press Pearl ကုန်တင်သင်္ဘော မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် နိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်၌ လင်းပိုင် ၅ ကောင်နှင့် ပင်လယ်လိပ် ၃၁ ကောင် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သီရိလင်္ကာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ တိရစ္ဆာန်အသေကောင်များအား ကိုလံဘိုမြို့တော်မှ တောင်ဘက် Kosgoda ကမ်းခြေသို့သွားရာ လမ်းကြောင်းရှိ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် တွင် တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးစီးဌာန၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ ဒေသတွင်း မီဒီယာသတင်းများက ဇွန် ၁၅ ရက်၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။
သေဆုံးသည့်လိပ်များ၏ တစ်သျှူးအစိတ်အပိုင်း လိုအပ်ချက်များအရ ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို အစိုးရ သရုပ်ခွဲစိစစ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Chandana Sooriyabandara က ပြောခဲ့သည်။
ဆက်စပ်သော တစ်သျှူးအပိုင်းအစများ အပါအဝင် နမူနာများ လက်ခံရရှိဆဲဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ သရုပ်ခွဲစိစစ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဒေသတွင်းမီဒီယာ သတင်းများက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် အထူးအဖွဲ့တစ်ခုကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြီးပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်ရန် တွဲအပ်တာဝန်ပေးထားကြောင်း အထက်ပါတာဝန်ရှိသူက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
X-Press Pearl သင်္ဘောအား စင်ကာပူအလံဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး nitric acid နှင့် အခြားဓာတုပစ္စည်းနှင့် အလှကုန် ၂၅ တန် ပါဝင်သော ကွန်တိန်နာ ၁,၄၈၆ လုံးကို သယ်ဆောင်ကာ မေ ၁၅ ရက်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ Hazira ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သင်္ဘောသည် မေ ၂၀ ရက်က ကိုလံဘိုဆိပ်ကမ်းအနီးတွင် အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မီးလောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မီးလောင်မှုအား ထိန်းချုပ်ရန် သီရိလင်္ကာရေတပ်အား တာဝန်ဖြန့်ကျက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
X-Press Pearl မီးလောင်မှုခဲ့ပြီး အပျက်အစီးများက ကမ်းခြေများသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့် တောင်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းမှာ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိ ကမ်းခြေများ၌ ကြီးမားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ပင်လယ်ရေကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
သင်္ဘောမီးလောင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
COLOMBO, June 16 (Xinhua) — The carcasses of five dolphins and 31 sea turtles had been found along the western coast of Sri Lanka after the burning of X-Press Pearl cargo ship in the seas off the Colombo Port, Sri Lanka’s Department of Wildlife Conservation said.
A senior official of the Government Analyst’s Department, quoted by local media reports said that samples including relevant tissue fragments were still being received.
A criminal probe was underway into the cause of the blaze. Enditem
Photo : Photo taken on June 2, 2021 shows part of the X Press Pearl,acontainer ship burnt near the Colombo Port, in Colombo, Sri Lanka. (Sri Lanka Air Force Media/Handout via Xinhua)